Fanohanana Satechi ho an'ny iPad, ilaina | Vaovao IPhone
Ny iPad dia miha-ilaina eo amin'ny biraontsika indrindra noho ireo fiasa vaovao ampidirin'i Apple ao amin'ny iPadOS, ary noho izany dia ilaina ny fanampiana tsara toa an'ity avy any Satechi ity izay manambatra ny famolavolana sy ny fiasa.
Ny iPad, raha ny ahy iPad Pro, dia nanjary fitaovana tonga lafatra ho an'ny fivezivezena, saingy tsikelikely dia mahazo toerana ihany koa aho rehefa eo amin'ny birao an-trano aho, sady mihinana atiny multimedia no manampy ahy amin'ny asako amin'ny solosaina. . Ary ho an'izay tsara kokoa ny mampiasa fijoroana manokana manandratra azy ary ahafahanao manamboatra ny zoro mitongilana mihoatra noho ny ataon'ny Magic Keyboard. Izany rehetra izany sy ny maro hafa dia ny azonao atao amin'ny alimina aliminioma avy any Satechi.
Vita amin'ny aliminioma tanteraka, ny fahatsapana ivelan'ny boaty dia tsy mety ho tsara kokoa. Mangatsiaka, mafy orina, mavesatra ... ny kalitaon'ny fananganana azy dia avo dia avo, ary feno antsipiriany kely izy izay maneho fa zavatra maro no nisaina rehefa namolavola azy. Ny zavatra miavaka voalohany dia ny azy, saingy avo (avo antsasaky ny kilao), lanin'ny fotony. Ity lanja ity dia manampy amin'ny fitoniana amin'ny fijoroana, izay ahafahanao mametraka ny iPhone amin'ny toerana irina rehetra nefa tsy mihetsika millimetatra tokana.. Ny savily roa amin'ny zana-kazo dia mamela anao hampiakatra na hampidina ny seta, ary hanitsy ny zoro fironana amin'ny iPad, manolotra hetsika saika feno: toerana ambony hijerena ny atiny multimedia, na saika azo atao amin'ny haavon'ny birao. manorata amin'ny Apple Pencil.
Niresaka momba ny antsipiriany manatsara ny fanohanana aho. Hitanay aloha ireo faritra maro izay rakotra silika malefaka hiarovana ny tampon'ny iPad rehefa apetrantsika eo amin'ny tohana. Izy io koa dia rakotra an'ity fitaovana ity amin'ny fotony, mba hiarovana ny ambonin'ny toerana hametrahantsika azy, ary hanamboarana azy mba tsy hikorisa eo amboniny. Ary manana lavaka roa koa isika ahafahantsika mamakivaky ilay tariby famahana, ahafahantsika mamerina ny iPad sy ny mitsivalana ary mitsangana, tsy misy olana kely akory.
Rehefa mametraka ny iPad amin'ny fijoroana dia avo dia avo ny fahatsapana filaminana. Ny savily dia matanjaka ampy raha vantany vao apetrakao ny toerana irina dia tsy hihetsika antsasaky ny milimetatra izy. Raha ny marina, raha afaka mametraka olana eo amin'ny fanohanana ianao dia indraindray mila tanana roa ianao mba hahafahany miteny azy. Tiako kokoa ny hakamoana na hanome tsikelikely ... ho ahy, ny fanapahan-kevitra noraisin'i Satechi momba an'io dia ilay fanapahan-kevitra mety.
Ny fijoroana dia mamela anao toerana ho an'ny fampiasana tena samihafa. Tsara ny mankafy atiny multimedia, fa mamela ihany koa apetraho eo akaikin'ny mpanara-maso anao lehibe hampiasa ny asan'ny Sidecar miaraka amin'ny macOS, izay mamadika ny iPad ho monitor faharoa, miaraka amin'ireo tombony rehetra azo avy amin'izany. Ary hitako fa ny toerana farany ambany dia tena ahazoana aina tokoa afaka manoratra na manao sary amin'ny Apple Pencil. Ary raha te hampiasa keyboard sy totozy ivelany ianao, ny fanananao iPad amin'ity fijoroana ity dia hahafahanao mametraka azy amin'ny toerana tsara indrindra hiaraha-miasa aminy.
Ny fahaizan'ny fijoroan'ny alimina Satechi dia mamela azy hampiasaina amin'ny fomba maro: miaraka amin'ny klavie ivelany sy totozy, hanoratana amin'ny Apple Pencil, hankafizanao ny atiny multimedia, na hampiasa azy io ho toy ny monitor fanampiny ho an'ny Mac anao noho ny Sidecar. Manampy an'io kalitao fananganana tena tsara sy fitoniana tena mahavariana io, ny valiny dia fitaovana fanampiny izay ilain'ny mpampiasa iPad rehetra eo amin'ny latabatr'izy ireo. Ny vidiny dia 55 € ao Amazon (rohy)
Milamina amin'ny toerana rehetra
Mijanona miorina amin'ny toerana irina
Mihetsika somary mafy ny hetsiky ny hatezerana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Satechi mijoro amin'ny iPad, tena ilaina
Ny serivisy fisoratana anarana Spotify dia tsy hitazona komisiona